Akhriso Warsaxaafadeedka ay Dowladda Soomaaliya ka soo saartay xadhigga C/raxmaan C/shakuur. – Xeernews24
Akhriso Warsaxaafadeedka ay Dowladda Soomaaliya ka soo saartay xadhigga C/raxmaan C/shakuur.
18. Dezember 2017 /in WARAR/NEWS /von admin
Dowladda Soomaaliya ayaa goor dhow war ka soo saartay xadhigga iyo howl galkii xalay lagu qaaday Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur, kaasoo Ciidamo ka tirsan Nabadsugida ay ugu dhaceen gurigiisa, kuna soo xidheen.
Shir jaraa’id oo ay si wadajir ah u qabteen Wasiirka Amniga Maxamed Abuukar Islow Ducaale, Xeer Ilaaliyaha Qaranka Axmed Cali Dahir ayaa lagu sheegay in hey’adaha amniga iyo xeer ilaalinta ay maalmahan wadeen baadhis dambiyo lagu tuhunsan yahay muwaadiniin, kaasoo ku aadan falal dambiyeed qiyaano qaran, khal khal gelin iyo bur burin.
Afhayeenka Wasaaradda Amniga C/casiis Cali Ibraahim ayaa saxaafada u akhriyay war saxaafadeedka, ayaa sheegay in C/raxmaan C/shakuur uu si cad uga horyimid ruqsadii loo heystay in la soo xidho, isla markaana ciidankiisa ay bilaabeen rasaasta, ayna ciidankiisa la galeen dagaal ciidamada amniga.
Waxaa uu sheegay in isagoo bad qaba C/raxmaan C/shakuur ay ciidamada amniga gacanta ku soo dhigeen, sidoo kale ay hey’adaha amniga la soo wareegeen qalab la aamisan yahay inay ka qeyb weyn ka qaadan doonto baadhitaanka.
https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/12/shakuur.jpg 185 272 admin https://www.xeernews24.com/wp-content/uploads/2017/06/xeernews-1.png admin2017-12-18 11:31:222017-12-18 11:31:22Akhriso Warsaxaafadeedka ay Dowladda Soomaaliya ka soo saartay xadhigga C/raxmaan C/shakuur.
Daawasho wacan shacabka reer Saylac oo wali saluug xooga ka wada saamiga Muusa... DAAWO Jaamacad ku taala Maraykanka oo lagu barto luuqada Afsoomaaliga cida barata...